PLA တောက်ပသော 3D ပရင်တာ ဖိုင်...
PLA ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ 3D ပရင်တာ...
PLA Marble 3D ပရင်တာ Filament
PLA သစ်သားအရောင် 3D ပရင်တာ F...
PLA သတ္တုအရောင် 3D ပရင်တာ...
Thermochromic PLA 3D ပရင်တာ Filament
TronHoo ၏ Thermochromic PLA သည် ချောမွေ့ပြီး တည်ငြိမ်သော ချည်မျှင်ထွက်ရှိမှုကို သေချာစေရန်နှင့် နော်ဇယ်ပိတ်ဆို့မှုနှင့် မကျေနပ်နိုင်သော ပရင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် မညီညာသော extruded ဝိုင်ယာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖယ်ရှားပေးရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အရည်ထွက်မှုတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ဤပစ္စည်းအသစ်သည် 3D ရိုက်နှိပ်ထားသည့်အရာများသည် ယေဘူယျ PLA ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အရာများထက် သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း အစွမ်းထက်သောဇွဲလုံ့လကိုပြသသည်။ထို့အပြင်၊ ချည်မျှင်ကြိုး၏ အချင်း 0.02 မီလီမီတာသာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် အဆုံးစွန်သော ပုံနှိပ်အသေးစိတ်များ လိုအပ်သည့် ပရောဂျက်များအတွက် အဆုံးစွန်သော တိကျမှုကို ပေးစွမ်းသည်။အရောင်မျိုးစုံရရှိနိုင်သဖြင့်၊ ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆိပ်အတောက်မရှိသော အစားအစာအဆင့် PLA သည် ပူဖောင်းများနှင့် ကွဲထွက်ခြင်းမရှိဘဲ တောက်ပြောင်သောအရောင်ကို ပေးစွမ်းပြီး 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အသစ်အဆန်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
PLA တောက်ပသော 3D ပရင်တာ Filament
1. [အမှောင်တွင် တောက်ပစေသည်]- အလင်းစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီးနောက် အမှောင်ထဲတွင် တောက်ပနေသော မီးစုန်းဓာတ်များ ပါရှိသည်။
2. [ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးထားသော ပက်ကေ့ခ်ျ]- TronHoo 3D ပုံနှိပ်ခြင်း အမျှင်များသည် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု နည်းပါးစေရန်အတွက် လေဟာနယ်နှင့် ဂရုတစိုက် ထုပ်ပိုးထားသည့် ဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။အထုပ်သည် ခြောက်သွေ့စေပြီး ဖုန်မှုန့်များနှင့် နိုင်ငံခြားအမှုန်အမွှားများကို ကင်းဝေးစေပြီး နော်ဇယ်များ ပိတ်ဆို့မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
3. [High Precision +/- 0.03mm Tolerance]- 1KG အပြည့်ရှိသော 3d ပရင်တာ အမျှင်ကြိုးများ၊ ပြီးပြည့်စုံသော အဝိုင်းပုံနှင့် အလွန်တင်းကျပ်သော အချင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော spool တစ်ခုစီတွင် 330m ခန့်ရှိသော အမျှင်များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ အနည်းငယ်သာ ကွဲထွက်ခြင်း၊ အနံ့ထွက်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ပူဖောင်းများ။
4. [Tangle Free & No Pluggging]- ၎င်းတွင် တသမတ်တည်းရှိသော အချင်းနှင့် အဝိုင်းပုံ၊ stringing နှင့် warping နည်းပါးပြီး ခိုင်ခံ့သော အလွှာကို တွယ်တာမှုရှိသည်။အပိုဒ်ခွဲကင်းစင်ပြီး အညစ်အကြေးကင်းစင်သော TronHoo 3D ပရင်တာ အမျှင်များသည် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းကန့်သတ်ချက် (RoHS) ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အရာများ ကင်းစင်ပါသည်။
4. [Money-back Warranty]- TronHoo သည် ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံချက် ပေးပါသည်။အရည်အသွေးကို လုံးဝစိတ်မကျေနပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မီ ဆက်သွယ်ပါ။
TronHoo BestGee T300S Pro သည် စားသုံးသူများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် desktop FDM/FFF 3D ပရင်တာဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဖန်တီးသူများကို ပိုမိုထက်မြက်သော၊ ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်တီးပြီး ပုံနှိပ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် လက်တွေ့ကျသော 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။T300S Pro သည် လည်ပတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် သတ္တုဘောင်မော်ဂျူလာဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံပါသည်။၎င်းသည် 4.3 လက်မ ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ အမြန်အပူရှိန် ပုံနှိပ်အိပ်ရာ၊ အလိုအလျောက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော ချည်မျှင်များ ထုတ်ယူခြင်း၊ ကြီးမားသော တည်ဆောက်မှု ပမာဏ၊ အမျှင်ဓာတ် ပြတ်တောက်မှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမှ အရှုပ်အရှင်းကင်းသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတို့ကဲ့သို့ စွယ်စုံရဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့် ထင်ရှားသည်။TronHoo BestGee T300S Pro FDM/FFF 3D ပရင်တာဖြင့် 3D ပုံနှိပ်စက်၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားလိုက်ပါ။
√ အမြန်အပူရှိန် ပုံနှိပ်အိပ်ရာ
√ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက် အလိုအလျောက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
√ ထိရောက်သော Denoising အတွက် TMC2208 Motor Drive စနစ်
√ တိကျသောနေရာချထားမှုအတွက် Optoelectrical Limit Switch
√ ကြီးမားသောတည်ဆောက်မှုပမာဏ (300*300*400mm)
√ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော Filament Extrusion
√ အခက်အခဲမရှိ ပါဝါပြတ်တောက်မှု ပြန်လည်စတင်ခြင်း။
√ Metal Frame Modular Structure ကို လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း
√ 4.3 လက်မ ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
√ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ပရင့်အလင်းရောင်
√ မတူညီသောအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြရန် အရောင်မျိုးစုံအညွှန်း
√ လွယ်ကူသော ပရင့်ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
LaserCube LC400 ဒက်စ်တော့ လေဆာ ထွင်းထုစက်
မော်ဒယ်သုံးမျိုးဖြစ်သည့် LC400၊ LC400S၊ LC400 Pro အပါအဝင် LaserCube LC400 စီးရီးများသည် 400x400mm ထွင်းထုဧရိယာရှိသော Tronhoo အသစ်ထွက်ရှိထားသော desktop သုံးစွဲသူလေဆာ ထွင်းထုစက်များဖြစ်သည်။မော်ဒယ်သုံးမျိုးစလုံးသည် အရပ်အမောင်းထိန်းရလွယ်ကူစေရန် ထူးခြားသော လေဆာအမြင့်ချိန်ညှိမှုပုံစံကို ခံယူသည်။
ဤစီးရီး၏ လေဆာခေါင်းများသည် ဖန်တီးသူများ၏မျက်လုံးများကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှကာကွယ်ရန် လေဆာအကာအကာများ တပ်ဆင်ထားသည်။အဆိုပါစီးရီးသည် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသော ထွင်းထုတိကျမှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ပုံသေ-အာရုံခံလေဆာကို တပ်ဆင်ပေးပါသည်။အမျိုးမျိုးသော ထွင်းထုခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ ဖန်တီးနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။Modular metal frames ဒီဇိုင်းအတွက် ဖန်တီးသူများသည် စက်ကို လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
√ 400x400mm ထွင်းထုဧရိယာ
√ ထူးခြားသော လေဆာအမြင့် ချိန်ညှိမှု တည်ဆောက်ပုံ
√ Intelligent လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေး
√ အဆင့်မြှင့်ထားသော အရည်အသွေးမြင့် Fixed-Focus လေဆာ
TronHoo BestGee T220S Pro သည် စားသုံးသူများအတွက် တောက်ပသောပုံနှိပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော desktop FDM/FFF 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် သတ္တုဘောင် မော်ဂျူလာတည်ဆောက်ပုံ 3D ပရင်တာဖြစ်သည်။၎င်းသည် လျင်မြန်သော အပူ-တက်ပုံနှိပ်ခြင်း အိပ်ရာ၊ အလိုအလျောက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော ချည်မျှင်ထုတ်ခြင်း၊ ကြီးမားသော တည်ဆောက်မှု ပမာဏ၊ အမျှင်ဓာတ် ပြတ်တောက်မှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း နှင့် ပါဝါပြတ်တောက်မှုမှ အရှုပ်အထွေး ကင်းသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတို့နှင့်အတူ ထူးချွန်ပါသည်။3.5လက်မ ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည် ဖန်တီးသူများအတွက် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်။TronHoo ဒက်စ်တော့ T220S Pro 3D ပရင်တာသည် တီထွင်ဖန်တီးသူများ၏ စွမ်းရည်များကို ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
√ ကြီးမားသောတည်ဆောက်မှုပမာဏ (220*220*250mm)
√ 3.5 လက်မ ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
TronHoo BestGee T220S သည် အသုံးပြုသူများအား ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေမည့် desktop FDM/FFF 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ပုံနှိပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တိကျမှုရှိသော သုံးစွဲသူအဆင့် 3D ပရင်တာဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ လျင်မြန်စွာ အပူပေးပရင့်အိပ်ရာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုအတွက် သတ္တုဘောင်၊ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော ချည်မျှင်ထုတ်ခြင်း၊ ထုထည်ကြီးမားသော၊ အမျှင်ဓာတ်ကုန်သွားခြင်းကို သိရှိနိုင်ခြင်းနှင့် ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်းမှ အရှုပ်အရှင်းကင်းသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများဖြင့် ထူးခြားချက်၊ T220S 3D ပရင်တာသည် ဖန်တီးသူများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပြီး စူးစမ်းရန် နည်းလမ်းများ။
LaserCube LC100 အိတ်ဆောင်လေဆာထွင်းထုစက်
Tronhoo LaserCube LC100 သည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော လူသုံးလေဆာ ထွင်းထုစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။Tronhoo လေဆာ ထွင်းထုစီးရီး၏ ခေါက်နိုင်သော အသေးစား မော်ဒယ်သည် လွယ်ကူသော ပုံနှိပ်စက်ဆက်တင်နှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အက်ပ်လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။၎င်းသည် သစ်သား၊ စက္ကူ၊ ဝါး၊ ပလပ်စတစ်၊ အထည်၊ သစ်သီး၊ ခံစားမှုနှင့် စသည်တို့ကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော ထွင်းထုပစ္စည်းများကို 405nm ကြိမ်နှုန်းမြင့်လေဆာဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ တိကျပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ကမ္ပည်းပြား၏ အနည်းငယ်တုန်ခါမှုအောက်တွင် အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။၎င်းသည် ခေါက်နိုင်သော ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံထားပြီး အမြန်စတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အမြင့်နှင့် ဦးတည်ချက်ချိန်ညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
√ Bluetooth ချိတ်ဆက်မှု
√ အက်ပ်ဆက်တင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်
√ Foldable Compact ဒီဇိုင်း
√ အနည်းငယ်တုန်ခါမှုအောက်တွင် ပိတ်ပါ။
√ စကားဝှက်ကို လော့ခ်ချခြင်း။
√ အရည်အသွေးမြင့် လေဆာ
BestGee T220S Lite Desktop 3D ပရင်တာ
TronHoo BestGee T220S Lite သည် အသုံးပြုသူများအား ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေမည့် desktop FDM/FFF 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ပုံနှိပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တိကျမှုရှိသော သုံးစွဲသူအဆင့် 3D ပရင်တာဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ လျင်မြန်စွာ အပူပေးပရင့်အိပ်ရာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုအတွက် သတ္တုဘောင်၊ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော ချည်မျှင်ထုတ်ခြင်း၊ ထုထည်ကြီးမားခြင်း၊ အမျှင်ဓာတ်ကုန်သွားခြင်းကို သိရှိနိုင်ခြင်းနှင့် မီးပြတ်ခြင်းမှ အရှုပ်အရှင်းကင်းသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများဖြင့် ထူးခြားချက်၊ T220S Lite 3D ပရင်တာသည် ဖန်တီးသူများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသော နည်းလမ်းများ။
KinGee KG408 Professional Desktop Resin 3D ပရင်တာ
TronHoo KinGee KG408 သည် Professional Desktop resin 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။Vat Photopolymerization နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် ဤ LCD ပရင်တာသည် တာရှည်ခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားစေရန် 8.9" 4K Mono LCD တပ်ဆင်ထားပါသည်။4th မျိုးဆက် အပြိုင် LED အခင်းအကျင်းကို အသုံးပြုထားသော ဤပရင်တာ၏ အလင်းရင်းမြစ်သည် သေးငယ်သောထောင့်ကို စိတ်ချယုံကြည်ရသော ရလဒ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တိကျမှုကို သေချာစေသည်။၎င်းသည် ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်အတွက် 0.025-0.1mm အလွှာအထူ 8 ဆအထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။တိတ်ဆိတ်သော မော်တာမောင်းစနစ်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဖြင့် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အဆင့်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် ဝင်ရိုးနှစ်စင်း ရထားလမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်း၊ နှင့် ၃ ဆ ပိုမြန်သော ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း၊ TronHoo KinGee KG408 resin 3D ပရင်တာသည် အနုပညာလက်ရာ ဒီဇိုင်နာများ၊ ဆရာများ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြင့်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ တိကျမှုနှင့်အတူ အလွတ်တန်းဖန်တီးသူများနှင့် စသည်တို့။
√ 8.9 လက်မ 4K Mono LCD
√ 4th မျိုးဆက် အပြိုင် ခင်းကျင်း
√ 8 ကြိမ် anti-aliasing
√ ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်း ၃ ဆ ပိုမြန်တယ်။
√ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်၊ အဆင့်ညှိရန်မလိုအပ်ပါ။
√ Dual-axis သံလမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
√ 0.025-0.1mm အလွှာအထူ
KinGee KG406 Professional Desktop Resin 3D ပရင်တာ
TronHoo KinGee KG406 သည် Professional Desktop resin 3D ပရင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။Vat Photopolymerization နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် ဤ LCD ပရင်တာသည် တာရှည်ခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားစေရန်6လက်မ 2K Mono LCD တပ်ဆင်ထားပါသည်။4th မျိုးဆက် အပြိုင် LED အခင်းအကျင်းကို အသုံးပြုထားသော ဤပရင်တာ၏ အလင်းရင်းမြစ်သည် သေးငယ်သောထောင့်ကို စိတ်ချယုံကြည်ရသော ရလဒ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တိကျမှုကို သေချာစေသည်။၎င်းသည် ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်အတွက် 0.025-0.1mm အလွှာအထူ 8 ဆအထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။တိတ်ဆိတ်သော မော်တာမောင်းစနစ်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဖြင့် လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်၊ အဆင့်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် ဝင်ရိုးနှစ်စင်း ရထားလမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်း၊ နှင့် ၃ ဆ ပိုမြန်သော ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း၊ TronHoo KinGee KG406 အစေး 3D ပရင်တာသည် အနုပညာလက်ရာ ဖန်တီးသူများ၊ ဆရာများ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြင့်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ တိကျမှုနှင့်အတူ အလွတ်တန်းဖန်တီးသူများနှင့် စသည်တို့။
√6လက်မ Mono LCD
√ Dual linear သံလမ်းများ
√ 2K မိုနို LCD
1. [Premium PLA Filament] TronHoo PLA 3D ချည်မျှင်သည် ကျုံ့နိုင်မှုနည်းပါးပြီး ကောင်းမွန်သော အလွှာချည်နှောင်မှုဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော သန့်စင်သော ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုထားပြီး မတူညီသော ပုံနှိပ်ပရောဂျက်များအတွက် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။100% သဘာဝပတ်​ဝန်းကျင်​သဟဇာတဖြစ်​​သောပစ္စည်းများဖြင့်​ပြုလုပ်​ထားပါသည်​။၎င်းသည် ဇီဝရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နိုင်သော၊ အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။
2. [Clog-free & Bubble-Free] ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 24 နာရီကြာ အခြောက်ခံပြီး လေဟာနယ်နှင့် လေဟာနယ်ဖြင့် စုပ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုချောမွေ့ပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ပုံနှိပ်ခြင်းကို ရရှိစေပါသည်။PLA ချည်မျှင်သည် အစိုဓာတ်ကျရောက်နိုင်သောကြောင့်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
3. [အရှုပ်အထွေးနည်းပြီး ကျယ်ပြန့်သော လိုက်ဖက်ညီမှု] PLA ချည်မျှင်များကို သပ်ရပ်ပြီး ကျွေးရလွယ်ကူကြောင်း အာမခံသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကွေ့အကောက်များ နှင့် တင်းကျပ်သော လက်ဖြင့်စစ်ဆေးမှု အပြည့်အစုံ။စျေးကွက်ရှိ FDM 3D ပရင်တာအများစုနှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
4. [Dimensional Accuracy & Consistency] ထုတ်လုပ်မှုတွင် အဆင့်မြင့် CCD အချင်း တိုင်းတာခြင်းနှင့် အလိုက်သင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် တင်းကျပ်သော သည်းခံမှုများကို သေချာစေသည်။အချင်း 1.75 မီလီမီတာ၊ အတိုင်းအတာ တိကျမှု + / – 0.02 မီလီမီတာ၊1 ကီလိုဂရမ် (2.2 ပေါင်) ။
5. [ဘက်စုံသုံးခြင်း] 3D ပုံနှိပ်စက်ဖြင့် မော်ဒယ်များကိုသာ ဖန်တီးပါ။စိတ်ကြိုက်ဖုန်းအိတ်များ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ဆားဖျော်စက်များ၊ ပန်းပုများ၊ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ခွေးတက်ဂ်များနှင့် အခြားအရာများစွာကဲ့သို့သော နေ့စဉ်အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်၏တီထွင်မှုများနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်နိုင်သောအပိုင်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး အသက်ဝင်စေပါသည်။
1. [အနံ့နည်းပြီး၊ ကွဲထွက်မှုနည်း] TronHoo ABS ချည်မျှင်ကို သမားရိုးကျ ABS resins များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော ပါဝင်မှု သိသိသာသာနည်းသော အစုလိုက်-ပိုလီမာပြုလုပ်ထားသော ABS အစေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ABS ကို 220 ဖြင့် 3D ပုံနှိပ်သည်။°C မှ 250°C ၊ ဤပစ္စည်း၏ အအေးခံမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အပူပေးအိပ်ရာ သို့မဟုတ် အလုံပိတ်တည်ဆောက်သည့်နေရာကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
2. [Smooth & Stable Printing]- TronHoo 3D သည် အရှုပ်အထွေးမရှိ၊ ပူဖောင်းများ နှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိကြောင်း ကတိပြုပါသည်။၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် အကောင်းဆုံးဆက်တင်များအောက်တွင် stringing နှင့် warping ပြဿနာများမရှိဘဲချောမွေ့စွာ extrusion နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော adhesion နှင့်အတူတည်ငြိမ်သည်။
3. [High Resistant] ABS သည် ပြင်းထန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံ၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ဖိုက်ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းသုံး ပုံတူရိုက်ခြင်းအတွက် အကြိုက်ဆုံး၊ ABS ပရင့်များသည် အရောင်တင်စရာမလိုဘဲ ကောင်းမွန်ပါသည်။
4. [Dimensional Accuracy & Consistency] ဤ 1.75mm အချင်း ABS ချည်မျှင်ကို တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ချည်မျှင်ချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် ပုံနှိပ်ခြင်းပြတ်တောက်ခြင်း ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။
5. [ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးခြင်း] ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 24 နာရီကြာ အခြောက်ခံပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် စိုထိုင်းဆရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ထားရန် 3d ပရင်တာကြိုးကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးအိတ်ကို အသုံးပြုပါသည်။နော်ဇယ်များ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ပွက်ပွက်ဆူခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်။
© မူပိုင်ခွင့် 2022 : All Rights Reserved.Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co. Ltd. Featured Products Sitemap Aquarium Safe 3d Printer Filament Filamente Pla PLA filament Uk 3d Printer Filament Pla Filament 1.75 Mm Cylinder Laser Engraving Machine All Products>